Isku diyaarinta shaqo raadiska | Career khayraadka ka USAHello | USAHello
aad diyaar u tahay inay bilaabaan shaqo raadinta tahay? Waxaa jira waxyaabo aad samayn karto si aad isugu diyaariso shaqo raadinta. Baro sida loo diyaariyo warbixin iyo u ogaato meesha aad eegto shaqooyinka.
Urursada macluumaadka loogu talagalay shaqo raadintaada
Waxa ugu horeeya ee aad samayn lahaydeen oo waa bilaaban ka fikirka ku saabsan xirfadaha shaqo ee aad leedahay. Waa maxay khibrada aad qabto in aad ku caawin doona in aad shaqo raadinta? shahaadada aad waddan kale loo isticmaali karaa in USA? Maxaa maalmood, saacadood, iyo jeer aad doonayn inuu shaqeeyo tahay? Fikirka waxyaalahaas ka hor mar ah oo ku saabsan kuu diyaarin doonaa inuu ku soo bilowdo shaqo raadintaada.
soo wada ururi dhammaan macluumaadka aad u baahan doontaa. Waxaad isticmaali doonaa macluumaadkan si ay u buuxiso codsiyada shaqada warqad ama codsato shaqo online. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad qor aad resume iyo warqadda lifaaqa.
Halkan waxaa ku qoran macluumaadka aad u baahan doonaan in ay:
Waa maxay nooca shaqada aad samaysay ee la soo dhaafay? Waa maxay nooca xirfadaha shaqo sameyn aad leedahay? Ka jawaabidda su'aalaha kuwaas oo kaa caawin doona inaad ogaato nooca shaqooyinka aad codsan kartaa in Maraykanka. Tusaale ahaan, haddii aad makaanik u shaqeeya ee la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu mar kale shaqada makaanik u heli. Haddii aad shaqeysay sanadka daawo, aad baadhitaan karaa sida aad u heli shahaado a.
Qor dhammaan shaqooyinkii aad ee la soo dhaafay iyo wixii waayo-aragnimo shaqo aad leedahay. Samee liis ay ku qoran macluumaadka loogu talagalay shaqo kasta oo aad ku samaysay, lugu daro:
The magaalada iyo dalka meesha aad shaqaysay
nooca shaqada aad ku samaysay
waajibaadka shaqada Your
Marka aad bilowday oo waxaa dhammaadkeedu shaqada
Inta aad la siin jiray
Waa maxay sababta aad shaqada ka tagay
xirfadaha aad shaqo
xirfadaha waa wax aad u ogaato sida loo sameeyo. Haddii aad u malaynayso oo ku saabsan shaqadaada xirfadaha iyo sidoo kale noocyada shaqooyin aad lahayd, waxaad Ogaan in aad codsan kartaa noocyo cusub oo shaqo haddii aad leedahay xirfadaha xaq u.
Ka fikir ku saabsan xirfadaha laba qaybood, oo meel ku qoro:
1. xirfadaha shaqo Guud waa kuwa khuseeya shaqooyinka badan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha sida isagoo
waqtiga, isagoo saaxiibtinimo, awood u leh inay dadka kale la shaqeeyaan, iyagoo shaqeeyo si badbaado leh awood iyo
ay awoodaan in ay si deg deg ah wax ku bartaan. Noocyadaas xirfadaha waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "xirfadaha jilicsan."
2. xirfadaha shaqo la xiriirta waxaa ka mid ah waxyaabaha sida ay awoodaan in ay ku shaqeeyaan forklift a, cabbiro
si sax ah, wado Gaari, diyaarinta dukuminti sharci ah ama shaqeeyaan software. Noocyadaas xirfadaha waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "xirfadaha adag."
waxaad codsan kartaa xirfadaha ee meelaha kale?
Ka fikir makaanik mar kale: makaanik leeyahay xirfadaha lagu qiyaaso si sax ah oo la isticmaalayo qalab ammaan ah. Kuwani waa xirfado shaqo in loo baahan yahay in shaqooyin kale, aad. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa xirfado shaqo, kuwaas oo dhismaha iyo xataa karinta.
Your waxbarashada ee la soo dhaafay
Waxaad u baahan doontaa inaad siiso macluumaadka ku saabsan asalka waxbarasho. Tan waxaa ku jira magacyada iyo goobaha dugsiyada aad ka qayb, bilaabaan oo ku dhameysan taariikhaha iyo haddii aad ka qalin jabiyay.
Nidaamka waxbarashada ee wadankaaga hooyo waxaa laga yaabaa in laga soo nidaamka American kala duwan - tirooyinka a kala duwan ee fasalada si ay u buuxiyaan dugsiga sare, tusaale ahaan. nidaamka jaamacadda laga yaabaa in ay leeyihiin heerarka kala duwan ee guusha ka badan kuwa aad halkan ka heli doontaa. Mararka qaarkood waxaad yeelan doontaa in ay "ku haboon" macluumaadka galay dukumeentiyo waxaa loogu talagalay shaqo-hooyo dhashay.
laga yaabaa in aad u tagteen inaad dugsi caanka ku ahaa ama adag si aad u hesho. Hubi in ay qoraan in magaca dugsiga ee ku saabsan resume ah. Waxaad dhihi kartaa wax u eg, "Institute tignoolojiga ee Filibiin waxaa loo arkaa mid ka mid ah dugsiyada ugu fiican dalka."
Xitaa haddii aad ma uusan dhammayn dugsiga sare ama tag koleejka, waa in aad ka mid ah tababar kasta oo kale oo aad dhammaysay marka aad ku qor waxbarashada aad ee la soo dhaafay. Tusaale ahaan, qaxooti badan ayaa qaatay fasallo hoggaanka ama tababar caafimaadka beesha ee xerada ama ka dib u dejinta. Waa in aad qorto wax kasta oo tababarka aad qaadatay.
Haddii aad ku hadasho wax ka badan hal luqad, waa hanti muhiim ah in aad shaqo raadinta. Hubi in ay sidoo kale ku qor af kasta oo aad ku hadasho af Ingiriis ka sokow. Ha ku qorin hoos Ingiriisi. Loo-shaqeeyayaasha u qaadan doonaa in aad ku hadasho af Ingiriis ka reading aad resume.
Akhri wax dheeraad ah talooyin resume iyo download template resume.
tixraacyada Professional yihiin dadka ku odhan doonaa, aad tahay shaqaale wanaagsan. Waxay noqon kartaa adag si ay ugu deeqdo tixraacyada marka hore ee aad timaaddo. Waxaa laga yaabaa in inta badan ama dhammaan tixraacyada shaqada ee la soo dhaafay waa in dal kale. Waxaad isticmaali kartaa tixraac ah dibadda haddii aad tixraac iyo cidda aad u shaqayso ku hadli karin afka la mid ah. Haddii aad tixraac ku hadla Ingiriisi oo aad u shaqayso ku hadla Ingiriisi, ama haddii labada ay ku hadlaan Soomaali, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu isticmaalo cidda aad u shaqayso dibada sida tixraac.
Waxaad ka akhrisan kartaa badan oo ku saabsan tixraac xirfadeed. Waxa kale oo aad arki kartaa and download a template liiska tixraaca xirfadeed.
Waxaad u baahan doontaa in aad ogaato dhammaan macluumaadka aad xiriir, ay ka mid yihiin sida loo format koowaad, dhexe iyo kan ugu dambeeya magacyada codsiyada, aad lambarka taleefanka, cinwaanka, iyo cinwaanka emailka. In aad resume, ma waxaad u baahan doontaa inaad ka mid ah macluumaadka shakhsiyeed sida taariikhda dhalashadaada, da, ama xaaladda guurka. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay si ay u wadaagaan macluumaadka in codsiyada. Read talooyin resume iyo heli template resume.
Caddeyn in laguu oggol yahay in ay ka shaqeeyaan
Waxaad u baahan doontaa in la caddeeyo si sharci ah loo ogol yahay in aad ka shaqayso Maraykanka. Waa in aad in aad u shaqayso siiso lambarka amniga bulshada. Waxa kale oo laga yaabaa in aad buuxiso baaritaanka asalka ah oo ay caddeeyaan cidda aad u shaqayso aadan galeen dambiyo kasta.
Maxaa iman kara marka xiga ee shaqo raadiska ah?
Marka aad macluumaadka soo ururay, waxaa jira waxyaabo kale oo aad sameyn karto si ay kuu caawiyaan in aad shaqo raadinta.
Shaqo raadinta xirka
Waxaa muhiim ah in aad la dhiso shabakad xirfadeed. Taas macnaheedu waa isku xidha dadka siin karaan tixraac ama kaa caawiya siday shaqo u heli. In aad shaqo ugu horeysay, tusaale ahaan, u hesho in ay dadka marka aad awoodo shaqeeyaan ogaado.
Waxaad tagi kartaa bandhigyada shaqo ee bulshada. Shirkadaha inta badan ay qabtaan dhacdooyin halkaas oo ay kuu sheegi karaan shaqooyinka ay leeyihiin, nooca shaqaale ay raadinayso, iyo sidaad u codsan karto. Marka socday cadaalad shaqo, hubi in aad keenaan nuqulada aad resume aad la. Is bar wakiilada shirkadaha aad jeceshahay, sharaxdo nooca shaqada aad raadinayso, oo iyaga u gacangeli macluumaadkaaga.
Waxaad ka heli kartaa munaasabadaha la xiriira meesha aad degan tahay adigoo booqanaya ah Facebook page dhacdooyinka, hubinta LinkedIn fursado isku xirka socda, ama saxiixin updates on Eventbrite iyo La kulan. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka xiriirinta.
Saxiix qalab shaqo online search
Abuur joogitaanka a professional online iyadoo la abuurayo profile a on websites shaqo raadinta. Qalabka ugu caansan ee aad shaqo raadinta yihiin LinkedIn, CareerBuilder, Dhab ahaantii, iyo Glassdoor. Waxaad badan oo ku saabsan ka akhriyi kartaa sida loo raadiyo fursado shaqo.
Ku biir dadaalka iskaa wax u qabso
Marka aad haysato waqti, iskaa wax u qabso ee urur maxalli ah. awoodaan si ay u isticmaalaan xirfadaha ama horumariyaan kuwo cusub inta aad ku caawiyaan dadka kale aad noqon doontaan. Xirfadaha aad ka heli aad ka faa'iideysan doonaan in aad search mustaqbalkiisa, oo aad fursad u heli doontaa in dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka American bartaan. Waxaad sidoo kale abuuri doontaa xiriirada kuwaas oo laga yaabo inay ku hadlaan adiga ku matalaya marka aad u baahan tahay tixraaca shaqo. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan iskaa wax u qabso iyo shaqooyin internship.
Iska aad degree qiimeeyo
Waxaa laga yaabaa inaad doonto inaad tixgelisid in aad degree qiimeeyo. Si arrintan loo sameeyo, aad soo gudbiso aqoonsiga si aad u Shirkadda qiimaynta qoraalka ah. Shirkadda eegi doonaa waxbarasho ee la soo dhaafay oo waxaad ku tidhaahdaa haddii degree ama shahaado ansax tahay in la isticmaalo ee dalka Mareykanka . Adeegani wuxuu mararka qaarkood waxay noqon karaan kuwo qaali ah.
loo shaqeeyaha intooda badan aan weydiin doonaa qiimeynta. Waxaa aad u fiican in ay sugaan ilaa iyo inta aad ka baran haddii ay tahay caado u ah shaqooyinka aad raadinayso. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo is qoraalladii aad shisheeye ama diblooma qiimeeyo.
Sidee si ay u raadiyaan fursado shaqo
Sida loo qoro warqad cover a
Sida loo dalbado shaqo online
Sida loo buuxiyo codsiga shaqada warqad
Talooyin shaqo raadinta ee dadka ajnabiga ah